Salonist Spa uye Salon Management Platform: Kugadzwa, Inventory, Kushambadzira, Kubhadhara, uye Zvimwe | Martech Zone
Salonist iyi salon software inobatsira spa uye salons kubata mubhadharo, kubhadharisa, kuita vatengi vako, uye kuita nzira dzekutengesa. Zvimiro zvinosanganisira:
Kugadzwa Kumisikidza Spas neSalons
Kutsvaga Pamhepo - Uchishandisa smart Salonist Online kubhuka software, vatengi vako vanogona kuronga, kurongedzazve, kana kukanzura kusangana chero kwavari. Tine zvese zvewebhusaiti neapps zvinokwanisa kubatanidzwa neFacebook ne Instagram magariro enhau. Nezvo, iyo yakazara nzira yekubhuka inogadziriswa zvakakwana. Hapana maviri matsva. Kuonekana pasina ano-kuratidza neSalonist.
Slot Blockers - Mira kutambisa nguva yevashandi nevatengi nekupa isingawanikwe nguva slots pakarenda yako. Ne slots blockers ekubhuka kwepamhepo, iwe une simba rekuratidza chete nzvimbo dzinowanikwa, dzinotadzisa kuwedzerwa kugadzwa kusarudzwa mukati menguva yakatarwa.
Kunze kwemaawa Kutsvaga - Ipa vatengi vako mukana wakanyanya wekuverenga mabhuku, kunyangwe kunze kwemaawa ebhizinesi, nekushandisa manejimendi software. Nesoftware yakanakisa salon, bhizinesi rako rinogona kuramba richifamba kunyangwe iwe usiri pamhepo. Salonist yakagadzirirwa kuchengetedza mutengi wako kupinda mukati, asi ivo vachiverenga zviri nyore chero nguva uye chero kwavari.
Pasuru Rutsva - Nakidzwa nerusununguko rwekugadzira mapakeji emasevhisi akasiyana mumabhureki ari nyore. Neiyi software yevatengi manejimendi, iwe unogona kuwedzera kutengesa uye mari muzvikoro zvako nekuita kuti zvive nyore kune vatengi kuisa maodha zvichibva pane zvavanofarira. Salonist salon software zvakare yakakosha mukuwedzera kuvimbika kwevatengi vako nemapendero esalon asina musono pamunwe wavo.
Nhengo Kubhuka - Ipa vatengi vako kukurudzira kuti varambe vakavimbika vachishandisa iyo yepamhepo kubhuka uye kuronga chimiro. PaSalonist, varidzi ve salon vanogona kumhanyisa chirongwa chekuvimbika chinopa nhengo madhisiti kune mamwe masevhisi. Izvi zvakave zvichiratidzwa kutyaira salon kukura uye kuwedzera kwevatengi kuchengetedza mitengo.
Gamuchira Kubhadhara - Zvingave zvinonakidza sei kuve neyakanakisa salon software inoita kuti kubvuma kubhadhara mhepo? Salonist inouya newijiti yekubhuka yepamhepo yakabatana nePaypal, Stripe, uye Authorize.Net. Varidzi veSalon vanogona kuwana mari yebasa rako nekungonongedza kutenga newijeti iyi pane yedu salon manejimendi software. Iwe unogona zvakare kugamuchira ese mafomu ebhadharo needu akabatanidzwa Point of Sale.
Kushambadzira kweSpas neSalons
Ongorora Management - Ongororo inzira inonakidza yekuratidza nyika kuti urikuita chimwe chinhu nemazvo. Iyo inokubatsira iwe kuchengetedza vatengi vazhinji uchivachengeta vakavimbika. Salonist Kugadzwa kuronga software kunoita kuti iwe uwane chaiyo-nguva mhinduro kubva kune vako vatengi pane zvako zvigadzirwa uye masevhisi. Nekukurudzira kunotumirwa kuburikidza neSMS uye email paema smartphones avo kuti akodzere manejimendi manejimendi, unogona kugara wakabatana nevatengi vako.
Coupon Management - Kana paine chinhu chimwe chinodiwa nevatengi, ndezvemahara masevhisi. Ipa mibairo vatengi vako nekuda kwekubata kwavo pamwe nemutengo uye coupon zvinopihwa pane ese matsva ekuraira. Iko hakuna kuomarara maitiro anobatanidzwa. Iwe unogona kubata iri kodzero kubva kuGadzira Salon uye Spa Discount Coupons tebhu pane smart salon software. Chengetedza vatengi vako vachiuya neakawanda ezvikwereti.
Gift Cards - Ipa vatengi vako mukana wekupa zvipo vadiwa vavo nemasevhisi ako pazviitiko zvakakosha. Kunyangwe chiri chiitiko chegore kana kupemberera zuva rekuzvarwa, kadhi rechipo rakasarudzika paSalonist rinogona kukubatsira kuti ubatanidzwe nevatengi vangangove. Ipuratifomu inozivisa pakarepo kuburikidza neemail kana SMS.
Kuvimbika System - Kuvimbika zvirongwa kuburikidza nevatengi manejimendi ndeimwe huru mubayiro system kune vako vatengi. Izvi zvinobatsira mukuvandudza kuwanda kwekushanya kwavo. Tarisa uone Salonist software kuti uwane nyore kuzvirongwa zvekuvimbika izvo zvinokurumidza kukurudzira vatengi vako kutumira, kuita, uye chengetedzo.
SMS Campaigns - Deredza mukana wekuti hapana-zvinoratidzwa kubva kune vatengi vako. Salonist inokubatsira kuti ugare uchikurukura navo kuburikidza nezviyeuchidzo zvekugadzwa, kuita kwevatengi, mishandirapamwe yekusimudzira, uye nezvimwe zvakawanda. Kurisa bhizimusi rako resalon nekupinda muhurukuro nevatengi vako uye nekuziva chaizvo zvavanoda.
Pamusoro pegadziriro yekugadzwa uye kushambadzira, Salonist inosanganisirawo manejimendi manejimendi, ekubhadharisa, mari yekugadzirisa, manejimendi mari, manejimendi nzvimbo, online chitoro, analytics, poindi yekutengesa, nharembozha, mafomu epamhepo, uye nhoroondo dzakadzama. Iyi salon software yakagadzirirwa zvese zvaunoda kuti uwedzere mari, chengetedza nguva, kusimudzira kuoneka kwechiso, uye kuita sarudzo dzakangwara muindastiri yekunaka. Ongorora maficha echishandiso ichi chinodiwa kwazvo uye gadzirira kuita bhizinesi rako zvirinani.
Vatengi vavo vanosanganisira ekugera mabvudzi, masalon salon, varapi vekusimbisa, zvipikiri, zvipikiri, marital salons, yekurapa spa software, yekushongedza ganda, vateki vematato, varidzi vematumba, maseni ekuchenesa, uye vanochenesa zvipfuyo.
Kutanga Kwayedza Yemahara
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Salonist.
Tags: aesthetic gandaAnalyticsmamiriro ekugadzwamashopuvaridzi vematumbamabharoni salonsvatengi manejimendikushandisa maribvudzi salonsInventory utaririmanejimendi nzvimbomasasi ekurapayekurapa spa softwarenharembozha applicationnzara salonsonline mafomupaIndaneti chitorovagadziri vezvipfuyopoindi yekutengesaPosprepaid musanganokushambadzira kwesalonspaskusona salonstattoo maartist